Puntland oo hal Arrin ku eedeysay Dowladda Federaalka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Puntland oo hal Arrin ku eedeysay Dowladda Federaalka
Ardaan Yare 26 December 2019 26 December 2019
Shirka Golaha Wasiirada Puntland oo uu shir-guddoomiyey Madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni oo uu wehliyo Madaxweyne ku-xigeenka Axmed Cilmi Cismaan Karaash, waxaa todobaadkan looga hadlay Amniga, Tayeynta Waxbarashada, diiwaangelinta iyo dib u habeynta Shaqaalaha iyo qodobo kale.
Shirka ayaa waxaa warbixino looga dhageystay Xubno kamid ah Golaha Wasiirada Puntland,iyaga oo soo gudbiyey Arrimo la xiriira Wasaaradahooda.
Afhayeenka Puntland Jaamac Dabaraani ayaa sheegay inay nasiib darro tahay in dowladda Soomaaliya Ardayda Puntland u diidey Shahaadada Dugsiyada Sare ee Sanadkan.
Waxaa uu sheegay in dowladda Federaalka ay dagaal kula jirto horumarka Waxbarasho ee ka jira deegaannada Puntland,Isla markaana Arday farabadan oo loo diidey Shahaadada Sanadkan ee Dugsiyada Sare ay ku xayiran yihiin Magaalada Muqdisho iyo deegaanada Puntland.